बाल्यकालदेखि नै गैंडाको खाग तस्करी, कता जाँदैछ समाज ? - EKalopati
बाल्यकालदेखि नै गैंडाको खाग तस्करी, कता जाँदैछ समाज ?
चितवन । राज्यले १६ वर्षमुनिका नागरिकलाई बालबालिकाका रूपमा हेर्ने गरेको छ । १६ वर्ष पुगेपछि मात्रै व्यक्तिले नागरिकता पाउने गर्छ । बालबालिकालाई शिक्षादीक्षा दिनु उसको बाबु आमा र राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । चेपाङ समुदायका एक व्यक्तिले भने आफ्नो छोरालाई १४ वर्षकै उमेरदेखि दुर्लभ एकसिंगै गैंडाको चोरी शिकारीमा संलग्न गराएको पाइएको छ ।
चितवन कालिका नगरपालिका–११ सैपामका बिन्द्रसिंह प्रजाले आफ्ना छोरा करण मुक्तान भनिने करण प्रजालाई १४ वर्षकै उमेरदेखि गैंडा चोरी शिकारीमा संलग्न गराएका हुन् । २९ वर्षीय करण प्रजा आजभन्दा १५ वर्षअघिदेखि बुबासँग गैंडाको खाग तस्करीमा संलग्न हुँदै आएका छन् । गैंडा मारेको आरोपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ३० असार २०७२मा बाबु छोरालाई नै दोषी ठहर गर्दै जनही १५ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो ।
पक्राउ परेका आठजनालाई निकुञ्जले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा गैंडाकोट नगरपालिका–१ धारापानीका ३२ वर्षीय चतुरे भन्ने गोपाल सारु, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–१ का ३५ वर्षीय कवि भन्ने रामकुमार श्रेष्ठ, मनहरी गाउँपालिका–४ मसिने टोङग्राङ खोला बस्ने ३० वर्षीय जयबहादुर प्रजा र सोही ठाउँका ३६ वर्षीय दिलबहादुर प्रजा भन्ने सिंहराम प्रजालाई पक्राउ गरेको हो ।
Previous articleसामान्य झुसेलाई ‘यूके लाहुरे’ सम्झेर ज्यान र सम्पत्ति लुटाएपछि…
Next articleटहराबाटै बालक अपहरण !